Andohatapenaka : Hanatsahatra ny asany ireo mpitatitra -
AccueilSongandinaAndohatapenaka : Hanatsahatra ny asany ireo mpitatitra
Andohatapenaka : Hanatsahatra ny asany ireo mpitatitra
Nisy namefy ny tany ao anatin’ny tobim-piantsonana Andohatapenaka. Malahelo ireo mpitatitra sy ny mpitantana, ka mangataka ny hamerenana izany ao anatin’ny 48 ora. Mipetraka ny sora-baventy. “Tsy ekenay mpitatitra ny fanomezana ny tany ho an’olon-kafa, omenay 48 ora ny fanjakana hamerina aminay mpitatitra ny taninany.”Hentitra ny fanambarana nataon’ny mpitatitra sy ny tompon’andraikitra eny amin’ity “Gare routière” ity, fa handray fepetra amin’ny fanakatonana ny asa fitaterana eny amin’ny tobim-piantsonana izy ireo, raha toa ka tsy mivaly ny fitakiana. Tapitra anio araka izany no fehim-potoana nomen’ireo mpitatitra sy ny filohan’ny fikambanana koperativa, miaraka amin’ny tompon’andraikitra. Ny 24 ora no vita, izay midika ho fampitandremana.
Araka izany, voalaza fa orinasa tsy miankina no namefy ny toerana ao anatin’ny toby fiantsonana, izay nisy nametraka, ary angatahana ny hanesorana azy. Handrasana anio noho izany ny fanatsaharana ilay asa fanamboarana, nokasain’ireto farany atao ao an-toerana, izay nanomezan’ny tompon’andraikitra alalana ity orinasa tsy miankina ity hamefy ny tany. Nomarihin-dRakotovao Philippe, tompon’andraikitra ara-teknika eo anivon’ny tobim-piantsonana Maki etsy Andohatapenaka noho izany fa ho betsaka ny fatiantoka, indrindra amin’izao maha-betsaka olona mivezivezy any amin’ny faritra izao. Raha toa ka hikatona ny toby fiantsonana, sy tsy hisy ny fandraisana andraikitra anio dia ho aiza avokoa ireo mpandeha. Tsiahivina fa zotra nasionaly mampitohy ny lalam-pirenena voalohany sy fahefatra, ary fahenina no miasa eny an-toerana. Nambarany hatrany fa ny fanjakana no nanome ny toerana, ary mbola tafiditra ao anatin’izany avokoa io toerana voafefy io. An’ny mpitatitra ny toerana, ary nokasaina hanaovana zavatra ho an’ireo mpandeha, izao nisy naka an-tsokosoko izao.
Tsara marihina fa nanomboka ny alahady alina lasa teo no nisy famefena ity toerana ity, tamin’ny alan’ny fanitso. Izany hoe tena natao an-tsokosoko mihitsy izany rehetra izany. Raha misy mbola manohy kosa ity asa ity, dia midika fihantsiana ady hoy ihany ny fanampim-panazavana. Taorian’izay indray no niditra an-terisetra nanala ny lakozian’ny gargoty teny an-toerana, izay fampiasan’ny mpandeha izy ireo. Nolazain’ny tompon’andraikitra fa nisy ny tetikasa lehibe nokasaina hatao teto amin’ity toerana ity. Ireo mpandeha sy ny mpitatitra no noheverina homena lanja amin’izany atrikasa izany, izay no hanaovana toerana fikojakojana sy toerana hisakafoana io toerana io, izao nomena ny tsy miankina izao. Miantso ireo tompon’andraikitra rehetra ny fikambanana, nandritry ny fitarainana. Raha nisy fanomezan-dalana hamefy, nomen’ny kaomina dia tokony hojerena akaiky ny famerenana izany amin’ny tompony.
Noho ny fetin’ny paska, dia nisy ny fitaritan-tsaina izay nentin’ ny Filoham-pirenena ho tari-dresaka tamin’ny fandaharana fotoam-bita ny zoma lasa teo, nambarany tamin’ izany fa “ fandinihan- tena fibebehana marina no hanjaka anatin’ny tsirairay amin’ ...Tohiny